Ku rakibidda TLP Arch Linux | Laga soo bilaabo Linux
TLP Waa qalab horumarsan oo ay maamusho oo kaliya terminal-ka ujeedadiisuna tahay in lagu maareeyo tamarta Laptops-keena, iyadoo si fiican looga faa'iideysanayo batterigooda.
Ma aqaano haddii aan hore u haysto qalab aan ku maareeyo tamarta KDE, GNOME o Xfce Waa lagama maarmaan in la rakibo codsigan, si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto inaad isku daydo waxaan kuu sheegayaa sida, sidoo kale waxay faa'iido u lahaan doontaa isticmaaleyaasha isticmaala kaliya Maareeyayaasha Daaqadda.
Si aad ugu rakibto qaybinta aan ahayn Arch Linux, waad aadi kartaa xidhiidhkan
Isticmaalayaasha leh Yori rakibay waa inay ordaan:
Laakiin taas ma adeegsado, ee waxbaan ku sameeyaa makepkg. Dhibaatadu waxay tahay markii aan isku dayay inaan abuuro xirmada si aan u rakibo, waxaan helay qalad maxaa yeelay qoraalka PKGBUILD Waxaan iskudayey inaan galo gal aan jirin.
Talaabooyinka lagu rakibo TLP
Waxa ugu horreeya ee la sameeyo waa rakibidda ku-tiirsanaanta aad u baahan tahay BPD:
Haatan waa inaanu isku koobnaa mashruuca GitHUB:
Waxaan ka degnay kubbadda cagta leh qoraallada lagama maarmaanka u ah sidaas makepkg shaqo:
Waanu fureynaa oo orodnaa makepkg:
$ tar xfv tlp.tar.gz $ cd tlp $ makepkg
Marka xirmada tlp-0.3.9-9-any.pkg.tar.xz la abuuro waxaan ku rakibnaa:
Waana taas. Sidaan akhriyay, muhiim maahan inaad wax kale qabato, kaliya adkee adeegga oo socodsiiya:
$ systemctl awood tlp.service $ systemctl bilaw tlp.service
Kadib si aan u aragno tirakoobyada qaarkood ama aaladaha kumbuyuutarkeena waxaan fulinaa mid ka mid ah 3-da amar (mid gooni ah):
$ sudo tlp-stat $ sudo tlp-pcilist $ sudo tlp-usblist
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Ku rakibidda TLP Arch Linux
Heer sare Si kastaba ha noqotee, Debian waxaa jira codsi konsole ah oo la yiraahdo TOP oo runtii waxtar leh oo ku tusaya habsocodka waqtiga dhabta ah aadna uga dheereeya hawlwadeennada hawsha ee aan ilaa hadda arkay.
TOP waa qayb ka mid ah GNU. Gabi ahaanba dhammaan nidaamyada GNU / Linux waxay leeyihiin TOP (taas oo aanan jeclayn, habka… waxaan door bidaa HTOP). Mana fahmin waxa TOP uu ku leeyahay TLP ...
Waan kuugu raacsanahay. Intaas waxaa sii dheer, TOP waxay muujineysaa xaddiga xusuusta bilaashka ah ee khaldan: waxay u muujineysaa gadaal. Isbarbar dhig waxa aad ku helayso adoo isticmaalaya TOP iyo waxa aad ku isticmaasho HTOP waadna arki doontaa waxa aan ula jeedo.
Waad salaaman tahay waxaan u maleynayay in maqaalka uu fiicnaa laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii xirmadaas isku mid ah ay u shaqeyso debian iyo haddii si isku mid ah loogu rakibo, maxaa yeelay waxaan heystaa xps 15 in wi ... soconaya ku dhowaad 5 saacadood laakiin debian 7 64bits waxay socotaa 2:40 qiyaastii…
Xun aniga. Waxaan ilaaway inaan ku xirmo bogga mashruuca halkaasoo ay ku sharxayaan sida loogu rakibo mid kasta oo 'Distro' ah. Waxaan cusbooneysiiyaa boostada wax yar.
Elav way fiicantahay in la cadeeyo in isticmaaleyaasha isticmaala yaourt ay u baahan yihiin git ama ay ka fahmaan kubbadaha tarballs, iyaga ayaa ugu filan iyaga oo leh:
$ yaourt -S tlp
Haa, waa habka ugu horreeya ee aan ku muujiyo maqaalka.
Haddii aan si sax ah u fahmay, kani wuxuu kaliya kormeeraha terminal u yahay hababka, adeegyada iyo aaladaha aan hawlgalinay ama isticmaalnay xilligan, mise waan qaldanahay?
Gabi ahaanba waa qalad. TLP waa adeeg lagu keydiyo tamarta, wax shaqo ah kuma laha la socoshada nidaamka, adeegyada iyo qalabka. Ku rakib oo arag sida batterigaagu u socdo; waa inuu sifiican ushaqeeyaa (in kastoo si daacad ah aan u arko inaysan bedel dhab ah u aheyn Jupiter)
Jawaab Alejandro Nova
ok waad ku mahadsantahay caarada. tijaabinta hadda
Hal faahfaahin, looma baahna in lagu daro sudo yaourt: v
Kaliya maahan lagama maarmaan laakiin sidoo kale laguma talin, Yaourt laftiisuna wuu ka digayaa markuu doonayo inuu u isticmaalo suudo.
Su'aashaydu waxay tahay keebaa fiican tlp ama laptop-tool, laptop-kayga waqtigan xaadirka ah waxaa lagu rakibay laptop-qalab
Sida Irvandoval u weydiiyo, qof khibrad u leh, miyay ogaadeen waxqabad fiican? Ma u qalantaa rakibid?
way gunuunaceen dijo
tlp hadda waxaa laga heli karaa keydka rasmiga ah ee rasmiga ah
Ku jawaab mavillan